Sawirro:- Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay - Awdinle Online
Magaalada Muqdisho waxaa Maanta soo gaaray oo siweyn loogu soo dhaweeyay Musharax Madaxweynaha Soomaaliya Jibriil Ibraahim Cabdulle, kaas oo kamid ah ah musharixiinta ugu cadcad tartanka doorashada sanadka 2021.
Musharaxa ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay Xildhibaano ka tirsan labada Aqal, Siyaasiyiin iyo qaar kamid ah Shacabka ku nool Muqdisho, kuwaas oo taagnaa banaannka garoonka ilaa Isgoyska km4 ee Magaalada Muqdisho.
Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle oo Warbaahinta kula hadlay mid kamid ah hotelada Muqdisho ayaa u mahad celiyay Shacabka Soomaaliyeed iyo cid walba oo ka qeyb qaadatay soo dhaweyntiisa.
Sidoo kale Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalada kala guur ah, waxaana uu sheegay in xilligaan lagu jiro Shacabka Soomaaliyeed & siyaasiyiinta ay yihiin kuwo kala shakisan.
Waxaa uu sheegay in kalsoonidii ay Shacabka ku qabeen dowladnimada ay yaraatay taas bedelkeedana ay kaslooni ka raadiyaan Beelaha, isaga oo tusaalooyin farbadan soo qaatay.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Musharax Madaxweyne Jibriil Ibraahim Cabdulle uu Muqdiho ku qabto munaasabad uu ugu dhawaaqayo musharaxnimadiisa Madaxweynaha Soomaaliya.
Previous articleXOG: Qaramada Midoobay oo Amartay in si deg deg ah lagu qabto doorashooyinka labada Aqal
Next articleMusharax Jibriil oo Madaxda dowladda uga digay qalalaaso siyaasadeed & mid Amni